Spain bụ mba nwere oke ikuku mmiri na Europe | Netwọk Mgbasa Ozi
Spain bụ mba nwere oke ikuku ọkụ na Europe
Portillo nke German | | Ebili mmiri ọkụ
Mmetụta dị iche iche nke mgbanwe ihu igwe anaghị eme otu ihe na mba niile nke ụwa. Spain bụ otu n'ime mba ebe ebili mmiri na-arụ ọrụ karịa ma na-arịwanye elu ugboro ugboro. Mgbe na mba ndị ọzọ ihe omume ebili mmiri na-adịkarị na nkezi n'etiti ụbọchị 3 na ụbọchị 4, na Spain ha ga-adị n'etiti 4 na 5.
A na-eme nnyocha bụ nke Institute for Environmental Diagnosis and Water Studies nke Council kacha elu maka nyocha sayensị (CSIC) na nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ sayensị Environmental Health Perspectives, nke nyochaa oke ọkụ nke mere n'etiti 1972 na 2012 na mba 18 ebe oke ihu igwe ndị a kachasị. Olee ihe ndị ha rụpụtarala?
Nnyocha ahụ e mere enyochala ọnụọgụ okpomọkụ nke thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na-atụ maka isi obodo mpaghara niile. Dị ka oké ọkọchị, Enweghị nkọwa zuru ụwa ọnụ nke ihe ọkụ ọkụ bụ. Agbanyeghị, ọmụmụ a dabere n'echiche iri na abụọ nke ndị sayensị kwenyere.
Dị ka data enwetara mgbe ị debanyere aha niile, ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ebili mmiri okpomọkụ na-ewere Spain na, mgbe China gachara, na-eduzi ndepụta nke mba ndị ọzọ ebili mmiri na-ekpo ọkụ emeela kemgbe enwere ndekọ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana mmụba ugboro na ike nke ihe ndị a siri ike abawanyeala kemgbe 2003.
Ndị ọkà mmụta sayensị buru amụma ịrị elu a na ebili mmiri dị ka nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe. Ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-abawanye, a na-emesi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe ike. Na Spain enweela nkezi nke 32 ọkụ ọkụ kwa afọ.
Mpaghara Spain ebe ihe ịtụnanya ndị a kachasị dị na mpaghara ndịda nke Peninsula. Ihe egwu na ọnwụ site na ebili mmiri arịkwa elu.
Spain, dịka anyị kwurula n'ọtụtụ oge, bụ mba dị mfe mgbanwe mgbanwe ihu igwe na mgbe ọmụmụ na ndekọ nke ndị ọkà mmụta sayensị mere, ha na-ekwusi ya ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Spain bụ mba nwere oke ikuku ọkụ na Europe
Otu akụkọ na-akwado na 2016 bụ otu n'ime ndị na-ekpo ọkụ
Gịnị mere anụmanụ nwere ike iji atụ anya ala ọma jijiji?